Zatra gaboraraka | NewsMada
Par Taratra sur 10/05/2019
Hatao zotra filamatra ny taxi-be mampitohy an’i Vassacos sy Ivato. Malaza ratsy ami’ny fandikana ny lalànà velona izy ireo. Raha atao indray mijery, tsy miraharaha ny mpandeha ny mpamily sy ny mpanampy azy ireto. Ary ny tena loza, mody aloha ny fiara raha vao mipaika ny amin’ny 4 ora sy sasany tolakandro ka maro ireo mpiasa handeha hody no taraiky eo. Nandray andraikitra ny minisitera, ny mpitandro filaminana ary ny Antokon-draharaha miadidy ny fitaterana an-tanety (ATT). Asiana GPS ny fiara tsirairay hanaraha-maso izay dia alehany. Ny toe-tsain’ny mpamily sy ny mpanampy azy mihitsy aloha no mila hamboarina. Efa nisy tokoa anie ny fanofanana azy ireo teny Ankatso, saingy indrisy fa toy ny rano nandena lamosin-gana ka very maina. Vao mainka mafy loha tsy laitra hatoro izy ireo amin’ny tsy fanajana ny fitsipiky ny fifamoivoizana miteraka fitohanana, ny fanaovana tian-kano tsy tian-kano ny mpandeha, zary lasa takalon’aina isan’andro vaky izao.
Tsy ny zotra D ihany no tokony hojerena fa ireo kaoperativa rehetra mihitsy. Misy ihany ireo manao ezaka, saingy vitsy ka tsy mahaleo ny gaboraraka. Nahoana anefa no misy mpitatitra taksibrosy afaka manome fahafaham-po ny mpanjifa ka nahazo doka tamin’ny mpanao gazety vahiny mihitsy. Niaiky sy vaky vava ny mpanao fanadihadiana fa tsy fahita firy ny toy izao aty Afrika.
Ny sasany vao hafindra eny amin’ny toby fiantsonana manara-penitra dia tezitra sy tsy faly ary mitokona mihitsy aza. Fa aleo ihany ao anaty loto sy fako etsy amin’ny Fasan’ny karana no handraisana ny mpandeha. Ny loza koa anie vao lasa ny mpanara-maso, miverina amin’ ny fomba ratsy mahazatra azy ry zalahy e. Raha nahafaty zaza maro tokoa mantsy noho ny hamamoana ny mpamily iray, hentitra ny fanjakana. Herinandro raha ela indrindra no nisy fepetra noraisina dia izay. Vao voalevina ireo niharan-doza, tsy nisy te-hahalala intsony ny rehetra. Mankahery ny tompon’andraikitra mbola mazoto hanoro ny lalana tokony halehan’ny taxi-be isika. Na mahakely finonana aza ny mety hisian’ny fiovana tampoka eo, efa zatra gaboraraka loatra.